Nepal Dayari | अन्तिम पटक हेर्नुस् ! स्वर्गीय कलाकार जयनन्द लामाको स्वर र अभिनय रहेकाे याे अ’न्तिम गीत (भिडियो)
अन्तिम पटक हेर्नुस् ! स्वर्गीय कलाकार जयनन्द लामाको स्वर र अभिनय रहेकाे याे अ’न्तिम गीत (भिडियो)
फागुण ११, २०७८ बुधबार ६९३ पटक हेरिएको
लोकप्रिय गायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको बुधबार असामयिक नि- धन भएको छ । उनको नि- धनले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा शोक छाएको छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत थुप्रै कलाकारहरुले उनी प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका देख्न सकिन्छ ।
यस्तै केही साता अगाडि मात्र स्वर्गीय लामाको पछिल्लो गीत ‘महाभार लेकको जंगलमा याला’ सार्वजनिक भएको थियो । लामाले करिब दुई दशकपछि यो गीत दर्शक तथा श्रोतामाझ ल्याएका थिए । लामाकै शब्द तथा संगीत रहेको लोक गीतमा उनलाई गायिका दीपा लामाले साथ दिएकी छिन् । उक्त गति स्वर्गीय लामाले ३०-४० वर्षअघि नै संकलन गरेको थिएँ ।
जुन पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीको पुरानो र मौलिक परम्परागत गीत हो । ‘यो कुनै जात विशेषको गीत नभई ती भेकमा हरेक चाड पर्वमा पुर्खादेखि अहिलेसम्म पनि नाच्दै गाइने गीत हो’ गीत सार्वजनिकको समय गायक लामाले भनेका थिए ।
हेर्नुहाेस् उक्त भिडियाे गित:-